पैसा भएकै कारण लोकतन्त्र ठेकेदार, तस्कर र व्यापारीको पोल्टामा छ : डा.उद्धव प्याकुरेल | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-11-16T04:49:04.180914+05:45
पैसा भएकै कारण लोकतन्त्र ठेकेदार, तस्कर र व्यापारीको पोल्टामा छ : डा.उद्धव प्याकुरेल
personनरेश ज्ञवाली access_timeमंसिर १९, २०७४ chat_bubble_outline0
भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका राजनीतिक समाजशास्त्री तथा टिप्पणीकार उद्धव प्याकुरेलकाठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक हुन्। उनै प्याकुरेलसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गरेको आर्थिक व्ययका, लोकतन्त्रको अवस्था र सुधारका सम्भावनाका बारेमा गरेको कुराकानी ।
माथि भनिएझँै निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो माटो या देश सुहाउँदो प्रणालीको अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ । हामीले अरूले गरेको चैँ राम्रो होला कि भनेर जस्ताको तस्तै नेपालमा सार्न खोज्दा र फेरि त्यसभित्र सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर नहेरी अर्को नयाँतिर गइहाल्न्ने चलन बढी छ । भन्नुको अर्थ यो अवस्था एकै पटक फ्याटै आएको होइन, नवउदारवादका कारण विश्वको राजनीतिमा जुन परिवर्तन देखापरेको छ ।
हाम्रोमा दोष जति राजनीतिक नेतृत्वमा थोपरेर उम्कन खोज्ने चलन छ तर कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी गल्ती कर्मचारीतन्त्र र नेपालका पुँजीपतिहरूको पनि पाइन्छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सबभन्दा बढी भ्रष्ट भनिन्छ, जब कि राज्यको अधिकांश लुटमा कर्मचारीतन्त्र र पुँजीपतिहरू नै हावी भएको देखिन्छ ।
भर्खरै चुनावीतन्त्र कि लोकतन्त्र भनेर प्राध्यापक लोकराज बरालले एउटा बहसको सुरुवात गर्न खोज्नुभएको छ । हामी अहिले चुनावीतन्त्रमा छौँ । लोकतन्त्रको अभ्यास त कहाँ भएको छ र ? माथि भनिएझैँ हाम्रो सिस्टमै खसेको मतको ७, ८ प्रतिशत ल्याएको मान्छेले हामीमाथि शासन गरी रहेको कुरा लुकेको छैन । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हामी ‘थ्रेस होल्ड’ हुनुपर्छ भनेर कराउँछौ ।
आजको व्यवस्थाले तीन प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने दलमा तपाईंको मत पर्यो भने तपाईं प्रतिनिधिविहीन हुनपर्नेछ । यत्रो ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व नै नहुने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र हुनसक्छ ? लोकतन्त्रमा एक जनाको पनि सम्मान हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा छ । यो अप्ठ्यारो हाम्रो मात्रै कारणले होइन कि विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनले हामीलाई जकडेको छ । मलाई लाग्छ हामीले ‘ग्लोबल डेमोक्रेसी’लाई थाहा पाएर आफ्नै माटो अनुकूल संशोधन नगरेसम्म हाम्रो जस्तो देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन गारो छ ।